SONATA-CANTATA: ပင်လယ်မှသည် တောင်တန်းဆီသို့
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ ချောင်းလေးတခုရဲ့ ကမ်းပါးတစ်ဖက်ဆီမှာ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ ရွာလေးတွေ မေးတင်ထားတယ်။
ရန်ကုန်မြစ်နံဘေးက ဗိုလ်တထောင်ဆိပ်ကမ်းဟာ ဆံပင်လိမ်ကွေးကွေးနဲ့ ကလေးငယ်လေး ကိုယ့်ကို ထိန်းကျောင်းခဲ့တဲ့ နေရာဖြစ်တယ်။
ပင်လယ်ကာရံထားတဲ့ ကျွန်းလေး ပေါ်မှာ ရေကြည်ပြီး၊ မြက်နုပြန်သေးသတဲ့ ၂၇နှစ်အရွယ် မိန်းမပျိုကို မြုဆွယ်တယ်။
ချောင်းကို ပစ်လို့၊ မြစ်ကို ရှာခဲ့သူ တယောက်ဟာ ပင်လယ်မှာ သီးချိန်တန်သီးပြီး၊ ပွင့်ချိန်တန် ပွင့်နေလိုက်တာ… ရာသီစက်ဝန်း အနှစ် နှစ်ဆယ်။
သေကွဲ ရှင်ကွဲ ကွဲကြတဲ့အခါ ကျန်ခဲ့တဲ့သူက ပိုခံစားရတယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့အတွက် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကို နှုတ်မဆက်ပဲ ထွက်လာခဲ့တာ တောင်းပန်ပါတယ်နော်။ တကယ်တော့လည်း ပင်လယ်နဲ့ တောင်တန်းဆိုတာ သံသရာမှာ ကျင်လည်နေသရွေ့တော့ တဆက်တည်း မဟုတ်လား...။
၄၇ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ အမှတ်တရ ရေးပါတယ်။
ပျော်ရွှင်ပါစေ ဆုတောင်းပေးတဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကို ကျေးဇူးတင်ရင်း၊ တောင်းပေးတဲ့ ဆုနဲ့ ပြည့်စုံအောင် ကြိုးစားပါမယ်…။
ရေမြေခြားတစ်နေရာက မမသီတာတစ်ယောက် မွေးနေ့မှာ အစစ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ချစ်ညီမဇွန်က သတိတရနဲ့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်နော်။
ပျော်ရာ မှာ မနေ ရ... တော်ရာ မှာ နေ ရ တဲ့ ဘဝ တွေ ပါ... တော်ရာ မှာ နေ ရင်း ပျော်ပါစေ အစ်မ
ရစ်မလို့ဟာ ချစ်စရာ ဆင်ခြေလေးကြောင့် မရစ်တော့ပါဘူးလို့...
နေရာသစ်မှာ အစစ အဆင်ပြေပါစေ... မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းတယ်နော်... <3
WW Aung said...
So the time you came to meet me very quickly at Woodland Station, you must be 27yrs old. So we have been floating for 20 years now. No one knows how long more. ( my myanmar font didn't coke properly here ).
It's been 20 yrs now you came to meet me quickly at Woodland Station, SG.
ကျေးဇူးပါ ညီမဇွန်ရေ.. ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ
သိမ့်လို သူများကို ပျော်ရွှင်စေတာ သိပ်သဘောကျပါတယ်